Dhaimondi-Cheka Kushungurudza Jesu Pendant (14K) - Popular Jewelry
Dhaimondi-Cheka Kushungurudza Jesu Pendant (14K)
Kureba: 36.5 mm * (1.1 inch) (Kusanganisira Bail)
Upamhi: 18.3 mm *
Approx. Kurema: 9.7 gramu *
Kevin naWilliam vakapa hukuru hwevatengi. Ivo vaviri vaidzidzisa kwazvo nezve chero kubvunza kwandakaita maererano nependende. Hwakanaka mhando, yakasimba kwazvo, uye hunyanzvi hwekugadzira. Kunyanya kurudzira chitoro ichi.